သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 91
မောင်ရင်ငတေ ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၂ ● ပါရီနှစ်ကူးည (ဒုတိယပိုင်း) Le pont Neuf ၁၆၀၇ ပထမပိုင်းကို ဖတ်ပြီးအားပေးခဲ့တဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာ ဆရာအေးရဲ့အားပေးမှုနဲ့အတူ နှစ်ကူးည ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်လက်ရေးသား လိုက်ရပါတယ်၊ ပထမပိုင်းမှာ ရောက်နေတဲ့ Le quai Voltaire ဗော်တဲလ်ရ်လမ်းရှိရာ စဲန်းမြစ်ကမ်းနဖူးမှာ ထိုင်နေရင်း ပါလာတဲ့ပိုလန်ပြည်မှာပြုလုပ်သည်ဆိုတဲ့ ဗော်ဒကာရေပုလင်းလေး ထုတ်သောက်ရင်း စဲန်းမြစ်ရေတိုးတာကို မြည်းရင်း စိတ်အတွေးတွေက တောင်ရောက် မြောက်ရောက်နဲ့ပါ၊ Le pont Neuf (The new bridge) ပွန့်နဖ်တံတားသစ်ကြီးရဲ့ ညရှုခင်းအလှကလည်း ဘာကိုလွမ်းရမှန်းမသိပါဘူး၊ တခါကရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပခုက္ကူတဘက်ကမ်း ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေးလက်ပံချေပေါ်ဇက်ဆိပ်အနီးက အကြော်တဲလေးမှာသောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ တော အရက်ဖြူဖြူကိုလည်း သတိရမိနေသလိုဘဲ၊ ပိုလန်ပြည်မှာပြုလုပ်သည့် ဗော်ဒကာဆိုတာကလည်း...
ဇန်န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 91 of 104«1...8990919293...104»